N'ikwu ya n'ozuzu, uwe nwere akwa lace na lace na -adịkarị nro ma dịkwa nro, ọ ga -enyekwa nsogbu karịa mgbe ị na -asacha. Lezienụ anya n'ọtụtụ ebe, ọ ga -agbaze ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya. Ị ma ka esi asa akwa lace bụ ihe ziri ezi? Ugbu a, ka m mee ka ị mata ...
Kedu ụdị akwa bụ lace? Nnukwu nyocha nke ụdị akwa lace ise
A na -ejikarị ihe mkpuchi dị ka ihe inyeaka na uwe. Ọtụtụ ndị na -azụ ahịa kwenyere na lace bụ naanị akwa dị n'akụkụ uwe. N'eziokwu, lace bụ akwa mgbe akpachara mma. Ọ bụrụhaala na -akwa akwa, enwere ike ịgụta ya dị ka akwa, wee tinye ya na akwa, yana ihe mejupụtara ndị a ...